ONLF Oo Dawladda Deegaanka Soomaalida Usoo Jeedisay Inay Xal U Hesho Isku-dhacyada Beelaha - Jigjiga Online
HomeSomalidaONLF Oo Dawladda Deegaanka Soomaalida Usoo Jeedisay Inay Xal U Hesho Isku-dhacyada Beelaha
ONLF Oo Dawladda Deegaanka Soomaalida Usoo Jeedisay Inay Xal U Hesho Isku-dhacyada Beelaha
Jigjiga (Jigjigaonline) – Jabhadda ONLF ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in xukuumadda Dawladda Deegaanka Soomaalida looga fadhiyo inay xal u hesho isku dhacyada beelaha oo muddooyinkii dambe kusoo badaney.
Bayaanka kasoo baxay ONLF oo dhamaystiran waxa uu u dhignaa sidan:
Tan iyo markii ay isbedallada siyaasadeed ka dheceen dalkaee la soo afjaray cabudhintii iyo cadaadiskii lagu hayay bulshada Soomaalida Ogaadeenya, waxaa soo kordhayay colaadaha iyo isku dhecyada beelaha dhexdooda ah, kuwaasoo dhibaatooyin badan gaadhsiiyay dadwaynaha, islamarkaana carqalad ku noqday taabba-gelinta nabadda iyo horumarinta deegaanka.
Waxaa jira dagaallo badan oo dhex-maray beelaha Soomaalida Ogaadeenya oo gaystay waxyeellooyin dhimashoiyo dhaawacba isugu jira, kuwaasoo ka dhashay dhulal la iskuhaysto. Waxaa sidoo kale jira meelo badan oo la is hor-fadhiyo, lagana cabsi qabo inay dagaallo ka billowdaan, oo u baahan in laga qaado tallaabooyin lagu baajinayo dhiig macnadarro ah ku daata.
Colaadaha beelaha dhexdooda ah waxaa sabab u ah tuulooyinama dhul deegaan ah oo la isku haysto, waxaana intoodabadan raad ku leh siyaasadii taliskii hore ee ahayd abuuristatuulooyin ka turjumaya danaha amni ee taliska ee aan ka turjumaynin danaha bulshada deegaannadaas deggan. Arrintaasina waxay halis galisay amnigii dalka iyo xidhiidhkiiwanaagsanaa ee u dhexeeyay beelaha wada-dega ama deriskaah. Waxay sidoo kale khatar ku tahay daryeelka dhulka daaqsinta ah cimilada guud.
Sidaas darteed, waxay Jabhaddu ugu baaqaysaa bulshadaSoomaalida Ogaadeenya inay si degdeg ah u joojiyaan isku-dhacyada dhexdooda ah, isla markaana ay wada-xaajood iyois af-garad ku dhammeeyaan xurgufaha u dhexeeya.
Jabhaddu waxay sidoo kale dowlad deegaanka ugu baaqaysaainay la timaado barnaamij wax ku-ool ah oo lagaga hortegayoisku-dhacyada soo noqnoqonaya ee beelaha u dhexeeya, islamarkaana ay diyaariso qorshayaal cad-cad oo lagu xakamaynayo isku-dhacyadaas iyo hay’adihii qorshayaashaasfulin lahaa. Maadaamoo dalka ay muddo dheer dagaallo ka socdeen, cadaadis iyo gabood-fallo badana ka dhaceen, waxaalagama maarmaan ah in la dejiyo barnaamij dib u-heshiisiinah oo lagu furdaaminayo dhibaatooyinkii dhacay, bulshadanala isugu soo dhawaynayo.
Jabhaddu waxay dhinaceeda diyaar u tahay inay dowladdeegaanka kala shaqayso sidii xal waara loogu heli lahaacolaadaha beelaha ee maalinba maalinta ka dambaysa siikordhaya. Jabhaddu waxay aaminsan tahay in xaqiijintamidnimada shacabka iyo dib u-heshiisiinta bulshadu ay fure u yihiin xaqiijinta amniga dalka.
Jabhaddu waxay si cad uga soo horjeeddaa tuulooyinka aannacfiga u lahayn bulshada ee qaabka siyaasadaysan loo abuurayo, kuwaasoo danta laga leeyahay ay tahay is riix-riixiyo in Qabandi lagu helo.
Tuulooyinka noocan ah waxaykhatar ku yihiin amniga dalka, xidhiidhka bulshada iyodhawrsanaanta deegaanka, sidaas darteed waxay Jabhaddudowlad deegaanka ku guubaabinaysaa inay soo saartogo’aamo iyo qorshayaal ka dhan ah tuulooyinka noocaas ah, iyadoo la hubinayo in xallinta wixii khilaaf ah ee beelaha u dhexeeya loo maro garsoor dhexdhexaad ah oo cadaalad kushaqeeya.
Waxaa kaloo lagama maarmaan ah in la hirgeliyo barnaamijyo wacyigalin ah oo dadwaynaha lagu barayosarrayo sharciga iyo in kala-dambayntu ay fure u tahaynabadda iyo horumarka deegaanka.
Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogaadeniya (JWXO).
Madaxweyne Mustafe Iyo Axmed Shide Oo Kusoo Laabtay Magaalada Jigjiga
Xisbiga Dimuquraadiga Soomaalida Oo Soo Badhigay Jidka Loo Marayo Dibu-habaynta Siyaasadda DDS